Muxuu Antonio Conte ka yiri wararka la xiriirinaya Inter Milan? – Gool FM
Muxuu Antonio Conte ka yiri wararka la xiriirinaya Inter Milan?
(London) 07 Maarso 2017 – Macallin Antonio Conte ayaa hoosta ka xarriiqay inuu “aad ugu faraxsan yahay” sii joogista Chelsea, isagoo ka jawaabayay warar la xiriirinayay shaqada Inter.
Macallinkii hore ee Talyaaniga ayaa Chelsea geeyay figta sare ee horyaalka Premier League oo uu xagaagii tegey kusoo biiray, balse waxaa jirey warar isa soo tarayay oo sheegaya Suning Group ay doonayso inay ninkan kulul keento Nerazzurri.
Xitaa waxaa warkaasi sii kiciyay wakiilka Conte oo sheegay inuu macallinkani Stamford Bridge ka aadi karo wax uu ku sheegay “naadi taariikhi ah”, balse Conte ayaa iska fogeeyay wararkaasi.
“Halkan aad baan ugu farasxan ahay,” ayuu Conte maanta ka sheegay shir jaraa’id. “Waan kasoo shaqeeyay Talyaaniga, marka waxay rabaan inaan soo noqdo, taasina waa caadi, balse waxaan qandaraas 2 sano ah kula jiraa Chelsea.” ayuu raaciyay.
Kooxda SSC Napoli oo lagu ganaaxey lacag dhan €35,000 oo euro (Maxaa dhacay?)